musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Nepal Kuputsa Nhau » Wakave wakamboenda kunzvimbo yekuzvarwa kwaIshe Buddha?
Nepal Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Nepal ndiyo nzvimbo yekuzvarwa kwaIshe Buddha.
Tembere yaMaya Devi kuLumbini ichagamuchira vashanyi zvakare kana COVID-19 kutyisidzira yave kumashure.
eTurboNews mune yedu inoenderera nhevedzano yenzvimbo dzekuenda irikuyeuchidza nyika nezve mikana yekushanya iyo ichadzoka nekukurumidza.
Nepal inozivikanwa nekukwira makomo uye kufamba asi kune mufambi asina kujairika kune zvakawanda zvekunaka, mhuka dzesango uye nekumuka pamweya kwakamirira iwe. Lumbini ndiye quintessential muenzaniso weizvi.
Asi ziva, ino inzvimbo ine simba pamweya zvekuti mambo mukuru akaramba hondo ndokutora hupenyu hwerunyararo; Lumbini ane simba rekushandura.
Lumbini inzvimbo yeUNESCO World Heritage. Pane simba kana aura kuLumbini izvo zviri pachena.
Emperor Ashoka akamisa izvo zvinofungidzirwa kuve yake yekutanga kune akati wandei "Ashoka Mbiru" pano pakazvarwa Buddha. Kutonga kwaAshoka (ca 304-233 BC) kunoshamisa nekuti iye akamboita kunge mambo ane simba kwazvo weMambo weMauryan akangoerekana atendeukira kuBuddha, akasiya hondo, uye akapa makore ekupedzisira ehupenyu hwake kudzidzisa runyararo nenzira dzaBuddha.
Tembere yaMaya Devi kuLumbini ichiri nyaya yekuchera uye nyanzvi dzekuchera matongo dzichiri kuita zvitsva uye zvakakosha zvakawanikwa nezvesaiti. Pedyo nenzvimbo yazvino yetembere, Ashoka Pillar ane mukurumbira anomira aine chinyorwa chinoratidza ino nzvimbo senzvimbo yekuberekerwa yeBuddha.
Muna 2014 zvakaziviswa, Nepal inoronga kuvandudza Lumbini, yakagara ichizivikanwa senzvimbo yekuzvarwa kwaIshe Buddha, seGuta Renyika Runyararo.
Vazhinji vanopokana kuti kunyangwe paine kuyedza kwakasiyana siyana kwekushandura Lumbini se "Mecca yeBuddhist", nzvimbo iyi ichiri kuregeredzwa uye inoda mabhiriyoni emadhora mukudyara.
Nyanzvi zhinji dzinofunga kuti kuwanikwa kwacho kunogona kugadzirisa kukakavara pazuva rekuzvarwa kwaSiddhartha Gautama, uyo akazova Buddha.
Nhasi Lumbini anochengetera matembere mazhinji uye dzimba dzemamongi dzakavakwa nenyika gumi nembiri dzakasiyana. Inozivikanwa pakati pavo iRoyal Thai Buddhist Monastery, Zhong Hua Chinese Buddhist Monastery. Cambodia Monastery, iyo Runyararo Rwenyika Pagoda, uyezve iyo korona jewel, Maya Devi Tembere. Zviri nyore kuyambuka refu boulevard uye kuvashanyira vese. Kune zvakare musimamende pane-saiti nezviuru zvezvisaririra zvakafukunurwa mukati nekutenderedza saiti yeMaya Devi Tembere.
Wakakomberedzwa nenhoroondo uye kukosha kwechitendero kweLumbini kunogona kuve chiitiko chekupedza nyota yemweya saka iva nechokwadi chekuzvipa iwe nguva yakakwana yekuzvipinza zvese mukati.
Lumbinī muBuddhist pilgrimage saiti muRupandehi Dunhu reLumbini Province muNepal. Ndiyo nzvimbo iyo, sekureva kwechiBuddha, Mambokadzi Mahamayadevi akaberekera Siddhartha Gautama munenge muna 563 BCE
Ungasvika sei kuLumbini?
Nemhepo tora maminetsi makumi matatu kuenda kuSiddharthanagar uye 30 km kutyaira kubva ipapo.
Bhazi. 10-11 maawa anomira pakudya munzira
Yakavanzika mota 7-8 maawa
Kutora nzira kuburikidza neHetauda inopa mukana wekushanya kuBarsa Wildlife Reserve, Chitwan, kana vese vari munzira kana uchifamba kuburikidza nePokhara inopa mukana wekumira paBandipur dhorobha rakanaka pamusoro peguta rakazara mutsika yeNewar, wozoenda kuPokhara kushanyira Phewa Gungwa, tarisa iyo Annapurna massif. Kana iwe uine nguva uye uchida kuona iwo akanyanya akasiyana matopu uye nzvimbo muNepal, hira mota yakazvimiririra uye ita rwendo rwekusimuka uye uwane zvese murwendo rumwe.
Pane imwe nguva kuLumbini kune akawanda mahotera akanaka anopa akawanda emitengo nemasevhisi. Zvinokurudzirwa kuti iwe ugonyore pamberi pechero ipi neipi uye zvako zvese zvaunoda nzvimbo parwendo.
Nepal inosimudzirwa se Tsime reBuddha.
Munyori / mutori wemifananidzo akatora rwendo rwe "loop" nemotokari yakazvimirira muna 2015.